Boiler biomassa sy ny adihevitra momba ny fifandanjana CO2 | Fanavaozana maintso
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha niresaka momba izany angovo biomassa . Avy amin'ny inona izy io, ny fomba fiasa ary ny fiaviany avy amin'ny tombony sy fatiantoka. Nanao fanamarihana kely momba ireo boiler biomass aho, saingy tsy niresaka an-tsipiriany aho satria te hampiharihary eto amin'ny antsipiriany kokoa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia horesahintsika ireo boiler biomass samihafa sy ny adihevitra momba ny fifandanjana CO2 misy amin'ny angovo biomassa.
1 Inona ireo boiler biomassa?
2 Karazan-vilany biomassa
3 Loza-pellet-lavaka oliva
3.1 Boiler biomassa tsotra
4.1 Boiler gasification avo lenta
5 Tombontsoa amin'ny fananana boiler biomassa
6 Ny tsy fahampian'ny boiler biomassa
7 Resabe amin'ny fifandanjana CO2 amin'ny angovo biomassa
Inona ireo boiler biomassa?
Ny boiler biomassa dia ampiasaina ho loharanon'ny angovo biomassa ary ho an'ny ny famoronana hafanana ao an-trano sy tranobe. Mampiasa solika voajanahary toy ny paompy hazo, lavaka oliva, sisa tavela amin'ny ala, akorany voankazo maina sns. Izy ireo koa dia ampiasaina hanafanana rano amin'ny trano sy tranobe.
Ny fandidiana dia mitovy amin'ny boiler hafa. Ireo boiler ireo mandoro ny lasantsy izy ireo ary miteraka lelafo marindrano izay miditra anaty faribolana rano sy ny mpamadika hafanana, amin'izay dia mahazo rano mafana ho an'ny rafitra. Mba hanatsarana ny fampiasana boiler sy loharanon-karena biolojika toy ny solika, dia azo apetraka ny mpiorina izay mitahiry ny hafanana vokarina amin'ny fomba mitovy amin'ny fomba fanaovana takelaka amin'ny masoandro.
Mba hitahirizana ireo fako biolojika izay hampiasaina ho solika dia mila fitoeran-javatra fitehirizana ireo vilany. Avy amin'io kaontenera io, amin'ny alàlan'ny visy na mpanelanelana tsy mitsahatra, mitondra azy any amin'ny vata fandrahoana, izay misy ny fandoroana. Io fandoroana io dia miteraka lavenona izay tsy maintsy rarahana im-betsaka isan-taona ary mivangongo ao anaty asidrano.
Rehefa misafidy karazana boza biomassa hovidiana sy hampiasaintsika isika dia tsy maintsy mamakafaka ny rafitra fitehirizana sy ny rafitra fitaterana sy fikirakirana. Misy vovo avelao handrehitra karazana solika mihoatra ny iray, ny hafa kosa (toy ny vilany pellet) Karazan-tsolika iray ihany no avelany hirehitra.
Ny vilanin-tsakafo mamela ny fandrehitra solika mihoatra ny iray dia mila manana tahiry fitehirizana lehibe kokoa satria lehibe kokoa sy matanjaka kokoa izy ireo. Ireo dia natao ho an'ny fampiasana indostrialy.
Etsy ankilany, hitantsika ireo boiler pellet izay fahita indrindra amin'ny hery salantsalany ary ampiasaina amin'ny fanafanana sy rano mafana fanadiovana amin'ny alàlan'ny mpanangona ao an-trano hatramin'ny 500 m2.
Misy boiler biomassa miara-miasa amin'ny a fahombiazana manakaiky ny 105% izay midika hoe fitsitsiana solika 12%. Tsy maintsy dinihintsika ihany koa fa ny famolavolana ireo boiler dia miankina betsaka amin'ny hamandoan'ny solika tiantsika hampiasaina.
Ampangotrahina ho an'ny solika maina. Ireto boiler ireto dia manana inertia hafanana ambany ary vonona hihazona lelafo mahery. Ao anaty ny vilanin-koba dia azo tratrarina avo dia avo ka afaka manamboatra crystallize ny silavo.
Ampangotrahina ho an'ny lasantsy mando. Ity vinaingitra ity, tsy toy ny teo aloha, dia manana tsy fahampian-tsakafo mafana mahavita mandoro ny solika mando. Ny famolavolana ny boiler dia tsy maintsy mamela ny solika ho maina ampy mba hahafenoan'ny gasification sy ny oksidasi ary tsy misy setroka mainty vokarina.
Misy karazany maro ny vilany biomassa izay mampiasa pellets ho solika. Anisan'izy rehetra no ahitantsika:
Boiler biomassa tsotra
Izy io dia ampiasaina amin'ny fametrahana miaraka am-pahefana eo anelanelan'ny 91kW sy 132kW ary mampiasa pelila kesika ho solika. Ity boiler modular ity dia voaomana amin'ny fiasan'ny cascade. Izy io dia misy ny tanky fitehirizana, ny fitoeran-tsolika compressor ary ny rafitra suction ho an'ny fitaterana ireo pellets. Miteraka tahiry marobe ihany koa izy io satria mahavita mampihena ny fanjifana solika amin'ny alàlan'ny fampidinana ny mari-pana amin'ireo entona mandoro. Mahazoa fiverenana hatramin'ny 95%. Izy io koa dia manana rafitra fanadiovana mandeha ho azy. Izy io dia manana andiana turbulator izay, ankoatry ny fitazonana ny lalan'ny setroka, hanatsarana ny zava-bita, dia tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana ny sisa tavela ao amin'ireo lalan-tsetroka.
Ilay rafitra mandoro dia manana rafitra fanadiovana lavenona mandeha ho azy. Ny tapany ambany amin'ny vatan'ny may dia misy rafitra fanadiovana izay mandefa ny lavenona vokarina ao anaty fandoroana mankany amin'ny asidra. Ny fanadiovana dia tanterahina na dia mihazakazaka aza ny burner, izay ahafahana manova ny fampiononana sy mampihena ny fihinanana vilana.
Etsy ankilany, mahita boiler biomassa izay kitay kitay isika. Anisan'izany no ahitantsika:
Boiler gasification avo lenta
Ireo dia vinaingitra fandrehitra afo mandrehitra ho an'ny hazo kitay. Matetika izy ireo dia manana laharana amin'ny hery telo eo anelanelan'ny 20, 30 ary 40 kW.
Ny tombony azo avy amin'ity karazana boiler ity dia:
Fahombiazan'ny angovo avo lenta izay mampihena ny fanjifana solika. Ny fahombiazana azo dia 92%, izay mihoatra ny 80% takian'ny fitsipiky ny fametrahana.
Fanapahan-kevitra maharitra hatramin'ny fito ora.
Izy io dia manitsy ny herinaratra ateraky ny fangatahana noho ny rafitra fanovana elektronika azy.
Mampiditra rafitra fiarovana amin'ny fanoherana ny hafanana be loatra izy io.
Tombontsoa amin'ny fananana boiler biomassa
Ny tombony voalohany miavaka indrindra dia azo antoka fa ny vidin'ny biomassa. Raha ny mahazatra dia marin-toerana ny vidiny satria tsy miankina amin'ny tsena iraisam-pirenena toy ny ataon'ny lasantsy fosily. Nolazainay ihany koa fa angovo mora vidy io satria namboarina avy amin'ny loharanom-pahalalana eo an-toerana ka tsy misy ny sarany fitaterana. Mahasoa sy mifaninana dia manome fampiononana ho an'ny mpampiasa.
Ny tombony faharoa manamarika dia izany teknolojia azo antoka sy mandroso izy io. Izany hoe, tsotra ny fikojakojana azy ary avo ny fahombiazany. Ny pellet dia solika voajanahary izay, noho ny sandany avo lenta, amin'ny fomba azo havaozina sy ahazoana tombony, manome ny vilaniny vina ny vokatra hatramin'ny 90%.
Farany, ny tombony mazava indrindra dia ny fampiasany angovo madio sy tsy mety ritra satria havaozina. Mandritra ny fampiasany dia mamoaka CO2 izy satria mandoro lasantsy fosily, saingy tsy miandany ity CO2 ity satria nandritra ny fitomboany sy ny fivoarany dia nitaona CO2 ny akora hita nandritra ny fotosintesis. Io no ivon'ny resabe iray amin'ny fampiasana sy fandotoana ny angovo biomassa izay ho hitantsika avy eo. Ankoatr'izay, manana tombony izahay fa amin'ny fitrandrahana ny biomass de la jungle dia manampy amin'ny fanadiovana ny tendrombohitra sy fisorohana ny afo.
Tokony holazaina fa loharanom-asa any ambanivohitra ny biomassa ary manaja ny fikolokoloana ny tontolo iainana.
Ny tsy fahampian'ny boiler biomassa
Misy vilany biomassa soatoavina kaloria ambany raha ampitahaintsika amin'ny solika fôsily. Ny pelet dia manana ny antsasaky ny herin'ny kaloria amin'ny diesel. Noho izany dia mila solika avo roa heny isika mba hananana angovo mitovy amin'ny diesel.
Satria ambany solika ny solika toy ny pellet, toerana malalaka no ilaina hitahiry. Raha ara-dalàna, ny silila dia mila silo hitehirizana ny solika eo akaiky eo.
Resabe amin'ny fifandanjana CO2 amin'ny angovo biomassa
Araka ny fantatsika, raha te hampiasa angovo biomassa dia tsy maintsy mandrehitra solika isika. Mandritra ny fandoroana ny solika dia mamoaka CO2 amin'ny atmosfera isika. Ka inona no mampiavaka ny angovo biomassa amin'ny solika fôsily?
Mandritra ny fitomboana sy ny fampiroboroboana ny akora izay ampiasainay handoroana, hambolena, hamboarana, taolam-pambolena sns. Izy ireo dia mifoka CO2 avy amin'ny atmosfera amin'ny alàlan'ny fotosintesis. Izany dia mahatonga ny fifandanjana CO2 ny angovo biomassa heverina ho tsy miandany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny habetsaky ny CO2 izay avoakantsika amin'ny habakabaka amin'ny alàlan'ny fandrehitra ireo solika voajanahary dia natelin'ny zavamaniry nandritra ny fitomboan'izy ireo, noho izany dia azo lazaina fa aotra ny famoahana tanteraka ny atmosfera.
Na izany aza, toa tsy izany no izy. Tsy toy ny lasantsy fôsily, ny CO2 avoakan'ny lasantsy biomassa, dia avy amin'ny karbaona nesorina teo amin'ny atmosfera tao anatin'ny tsingerina biolojika iray ihany. Noho izany, tsy manova ny fifandanjan'ny CO2 amin'ny atmosfera izy ireo ary tsy mampitombo ny vokatry ny trano.
Amin'ny fandoroana karazana solika, maro ny singa mpamokatra vokatra azo ampiasaina, ka anisan'izany ny azota (N2), gazy karbonika (CO2), etona rano (H2O), oxygen (O2 tsy ampiasaina amin'ny fandoroana), carbon monoxide (CO ), azota azota (NOx), diôzida solifara (SO2), tsy may (solika tsy mirehitra), soot ary potipotika. Saingy, amin'ny biomassa mandoro, CO2 sy rano ihany no azo.
Inona no mitranga amin'ity fifandanjana CO2 mampiady hevitra ity? Eny tokoa, ny CO2 dia novokarina vokatry ny fandoroana ny biomassa, fa izany dia heverina ho fifandanjana aotra satria voalaza fa ny fandoroana ny biomassa dia tsy mandray anjara amin'ny fampitomboana ny vokatry ny entona. Izany dia satria ny CO2 navoaka dia ampahany amin'ny atmosfera ankehitriny (io dia ny CO2 ny zavamaniry sy ny hazo dia mitroka sy mamoaka hatrany ny fitomboan'izy ireo) ary tsy ilay CO2 nalaina tao ambanin'ny tany nandritra ny an'arivony taona maro ary navoaka tao anatin'ny toerana fohy ny fotoana toy ny amin'ny solika fôsily.
Ankoatr'izay dia tsy maintsy raisina fa ny fampiasana angovo biomassa dia mitahiry be amin'ny fitaterana solika izay, avy eo, dia mamoaka CO2 betsaka kokoa amin'ny atmosfera ary manova ny fifandanjan'ny tontolo iainana.
Araka ny hitanao, aorian'ireo lahatsoratra roa momba ny biomassa, izay loharanom-angovo azo havaozina, izay na dia tsy dia fantatra loatra aza, dia mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fikolokoloana ny tontolo iainana ary safidy angovo ho an'ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Boiler biomassa sy ny adihevitra momba ny fifandanjana CO2
2016 indray no taona mafana indrindra tamin'ny firaketana